प्रचण्ड व्यक्ति होइन, क्रान्तिनायक–राष्ट्रनायक हो : पूर्वमन्त्री श्रीपाली
देश र जनताको सबैभन्दा बढी माया क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा छ। म त उहाँलाई क्रान्तिनायक, राष्ट्रनायक, जननायक भन्न रुचाउँछु। क. प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) द्वारा २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध थालनी भई त्यसको निरन्तरता, सन्तुलन, प्रत्याक्रमणको चरणबाट देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीतासहितको संविधान संविधानसभाबाट घोषणा भई आज देश संघीयताको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।
उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकारको निम्ति सबैभन्दा बढी प्रचण्डले नै लडाइको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले नै आज हामी जो–जहाँ छौं, सबैको परिचय, परिभाषा र पहिचान बनाइदिएको छ। प्रचण्ड राजनीतिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा अब्बल नेता हुनुहुन्छ। उहाँ जनताको जनवाद हुँदै समाजवादको कार्यदिशामा स्पष्ट हुनुहुन्छ र हामी सबैलाई गोलबन्द गरिरहनुभएको छ।
गम्भीर समस्याहरुका बिचमा पनि देश र जनताकै निम्ति अहोरात्र खटिरहनुभएको छ। जुनसुकै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिको सामाना गर्न सक्ने र चुनौतीबिच सम्भावनालाई चुम्न सक्ने सामर्थ्य छ प्रचण्डमा। क्रान्तिका पाइलट प्रचण्डको गतिशील रफ्तारमा दौडन नसक्नेहरु अनेक बहानामा चोइटिएका, उछिट्टएका छन्। तापनि सबैलाई समेटेर फेरि अगाडि बढ्ने क्षमता पनि प्रचण्डसँगै छ।
जसरी प्रचण्डले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका निम्ति लडिरहनुभएको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। प्रचण्डको अपेक्षामा कमी अवश्य भएको छ। राज्यका अंगहरु, निकायहरुमा उत्पिडित समुदायका नेतृत्वहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुभयो। त्यहीअनुसारको सहयोगको कमी प्रचण्डलाई छ। उत्पीडित समुदायबाट विकास भएका नेता, कार्यकर्ता, जनताहरु प्रचण्डप्रति प्रतिवद्व छन्। उहाँको राजनीतिक आधार उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय नै हुन्, यो नै हो प्रचण्डको बलियो आधार।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता, जनताका नेता, आज राज्यसत्ता सञ्चालनमा बारम्बार सुविधा पाइरहेका र आफूलाई प्रचण्डनिकटको हुँ भन्ने केही नेताहरु ‘हिलोमा गाडेका किलो’जस्ता भएका छन्। घरि यता घरि उता दौडिदै चरम व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको देख्दा विश्वासको संकट पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले फ्याँक्नुभएको ‘मन्त्रीकार्ड’ले नेताहरुको दिमाग खल्वलाइदिन्छ। स्वार्थको रसतालबाट आफ्नै नेतृत्वमाथि जाई लाग्नु, विषवमन गर्नु निकै गम्भीर विषय हो। सम्भवतः यही कारणले हुन सक्छ प्रचण्डले ‘टीम’ नबनाएको। पार्टी एकतापछि नेतापिच्छे अरुका टीम छन्। तर अध्यक्ष प्रचण्डको आफ्नो टीम छैन। सबैको विचार र भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ। गर्वको विषय हो।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको एजेण्डा बोकिरहनुभएको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस लगायत उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका अधिकार प्राप्तिका संघर्षहरुमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महान शहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरु, घाइते अपांगको पक्षमा निरन्तर संघर्षशील नेतृत्व प्रचण्ड हुनुहुन्छ। जनयुद्धका धेरै कामहरु बाँकी छन्, यो कुराको बढी चिन्ता प्रचण्डलाई नै छ।
खस आर्यको बर्चश्व रहेको राज्यसत्तामा प्रधानमन्त्रीपछिको अर्थ र गृहको मुख्य साँचो उत्पीडित समुदायका नेतृत्वलाई सुम्पिनु ज्यादै महत्वपूर्ण विषय थियो, धेरैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मेयर, अध्यक्ष सदस्य लगायत जनप्रतिनिधि, राजदुत, राजनीतिक नियुक्ति पाएका छौं। प्रचण्डविना त्यो सम्भव थिएन। जनयुद्धविना त्यो सम्भव थिएन। यो कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ।
जनयुद्धको बेला गणतन्त्रको कुरा गर्दा बयलगाढा चढेर अमेरिकाको यात्राको गफ दिँदै खिसिटिउरी गर्नेको हातमा राज्यसत्ता छ, सत्ता र शक्तिको भरमा मैमत्त छन्। बाँदरको हातमा नरिवलझै बनेका छन्, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशीता। देशै बाँदरको हातमा नरिवलझै बनेको छ। ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो यो।
सहिद, वेपत्ता, घाइते, अपांग, महान जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको छ। त्यसको सबैभन्दा पीडा प्रचण्डलाई छ, पीडा त जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान जनतालाई छ। कंशहरुलाई के थाहा ? भन्छन् – बढी निहुँ खोजे कुर्सी भाँचिदिन्छु, गणतन्त्र, संघीयता त हामीले मानिदिएको मात्र हो, संसद भंग गरिदिन्छु, संकटकाल लगाउँछु, मध्यावधि निर्वाचन गराउँछु, अध्यादेश ल्याउँछु, पार्टी फुटाउँछु, पार्टीको बैठकमा बस्दिनँ, निर्णय मान्दिनँ।
यस्ता गैरजिम्मेवारी तथा अवैधानिक, अराजनीतिक, अपारदर्शी क्रियाकलाप र पश्चगामी विचार र प्रतिगमनकारी व्यवहारले बढी त प्रचण्डलाई नै पीडा दिइरहेको हुन्छ, तिनीहरुका विरुद्ध डटेर प्रतिरोध गर्ने योद्धाहरुको खाँचो छ प्रचण्डलाई। अहिलेका विचौलियाहरुबाट त्यो सम्भावना पनि कमी छ। विश्वासिलो उर्जाशील, गतिशील ‘नयाँ टीम’का साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको छ प्रचण्डलाई।
इतिहास साक्षी छ – विश्व इतिहासमा क्रुर तानाशाहहरु ढलेकै छन्, खुनी तानाशाहहरुको शासन सत्ता अन्त्य भएकै छ। सत्यको जीत अवश्य हुन्छ। प्रचण्ड सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीतासहित गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री क्रान्तिनायक, राष्ट्रनायक, जननायक, पूर्वप्रधानमन्त्री, नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको हरपल साथमा रहिरहनेछु र नेपाली जनता साथमा रहिरहनेछन्।
(पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपालीकाे फेसबुकबाट।)